ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (People’s Defence Force) ၏ သစ္စာ ဓိဋ္ဌာန် ၄ ချက်… – PVTV Myanmar
·9months ago ·48 Comments
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (People’s Defence Force) ၏ သစ္စာ ဓိဋ္ဌာန် ၄ ချက်
၂။ ငါတို့သည် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲအတွင်း ကျဆုံးခဲ့ရသော သူရဲကောင်းများကို သစ္စာစောင့်သိပါမည်။
၄။ ငါတို့သည် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် ငါတို့၏ အသက်ကို စွန့်လွှတ်ရန် အဓိဌာန်ပြုပါသည်။
Like – 37K Share – 12506
အားရကျေနပ်တယ် တိုက်ပွဲတိုင်း ဘေးမသီ ရန်မခဘဲ တိုက်တိုင်းအောင်ရမည် ✊✊✊✊✊
2021-05-09 at 8:11 PM
အသက် ချွေး သွေး တွေ နဲ့ ပေးဆပ်နေတဲ့ ပြည်သူကာကွယ်ရေး တပ်မတော်များကို အလေးပြုပါတယ်ဗျာ။ ဖယ်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးလဲ အများဆုံး ပေါ်ပေါက်လာပါစေ
Need to compose one good motivational song for PDF to inspire the public
Rosy Loon says:
2021-05-09 at 8:13 PM
ေဘး ကင္းေအာင္ ျမင္ျက ပါေစ
ညိမ္း ညိမ္းေအး says:
2021-05-09 at 8:14 PM
2021-05-09 at 8:17 PM
အနၱရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းပါေစ။ ျပည္သူ့ ခ်စ္တဲ့ PDF တိုက္ပြဲတိုင္းေအာင္နိုင္ရမည္။
MaKhine Yin Wai says:
When will u come to ygn?
D ka sount ny tu pr shint 🤗🤗
Violet Roselene Phyu says:
2021-05-09 at 8:19 PM
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အား လေးစားဂုဏ်ယူမိပါသည်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Wai Wai May Myint says:
2021-05-09 at 8:25 PM
စစ္မွန္ေသာ သစၥာ စကားေႀကာင့္
တိုက္ပြဲတိုင္း ေဘးမသီရန္မခ ပဲ ေအာင္ပြဲကို အလီလီ ဆြတ္ခူး နိုင္ပါေစသာ
က်ြန္မတို့ ျပည္သူ ကလဲ က်ေရာက္လတံ႔ေသာ ေဘးရန္ဟူသမ်ွ ေက်ာ္လႊားနိုင္ပါေစလို့ ဆုေတာင္ႀကပါမယ္
စစ္မွန္တဲ႕သစၥာ နဲ႕ စစ္မွန္တဲ႕ ေမတၱာ တရားတို့ေႀကာင့္ က်ြန္မတို့ နိုင္ငံ ေအာင္ပြဲကို ႀကိမ္းေသ ရရွိမွာပါ မိတ္ေဆြ/သူငယ္ခ်င္း
တိုင္းရင္းသား ေမာင္နွမ အေပါင္းတို့
Nay Thurane says:
2021-05-09 at 8:30 PM
တော်ရုံစိတ်ဓာတ်နဲ့ PDF ထဲ ၀င်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ PDF ထဲ၀င်လာကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ တွေအားလုံးအတွက် respect ပါ..ဂုဏ်ယူမှုနဲ့ အတူ လေးစားပါတယ်
2021-05-09 at 8:40 PM
အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းပါစေ။ ပြည်သူ့ ချစ်တဲ့ PDF တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ရမည်။
သတိ အမြဲရှိကြပါ၊ ဓါတ်ပုံ
များ များ မတင် ကြပါ နှင့် ၊
2021-05-09 at 8:43 PM
တရားသေားစစ်ကို ပြည်သူနဲ့အတူ အောင်ရမည်
Thet Ht says:
2021-05-09 at 8:47 PM
ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းကြပါစေ 🙏🙏🙏 ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ၏ ကြိုးပမ်း စွမ်းဆောင် မှုနှင့်အတူ လှပ‌သော စည်းလုံးညီညွတ်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ကြီး ပေါ်ထွန်း လာပါစေ ❤️❤️❤️
Aungkyi Lin says:
အင်မတန် အားရှိပြီး အားမာန်ပြည့်တဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ရဲ့ အသံတွေ နားထောင်မဝ ဖြစ်မိပါတယ်
2021-05-09 at 8:52 PM
Video ရိုက် ချက် ကစ အလန်း.
Mg Myo says:
2021-05-09 at 8:59 PM
ငါတို့သည် People Defense Army အား ငါတို့ ြပည်သူ ၏ ယုံြကည် အားကိုးရာ ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် အ ြဖစ် သစ္စာ ြပုပါ၏
PDF နှင့်အတူ မြန်မာပြည်သူ လူထု တွေရဲ့ တရားမျှတမူနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် ကျရာ နေရာကနေ တိုက်ပွဲ ဝင်ပေးနေကြပါသော အဖွဲ့အစည်းတိုင်း အယောက်စီတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
2021-05-09 at 9:11 PM
PDF လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ် ။တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်ပါစေ။
2021-05-09 at 9:13 PM
‌အောက်‌ခြေသိမ်း အလုပ်ပဲ လုပ်ရလုပ်ရ လိုအပ်ရင် အဆင်သင့်ပါပဲ
Zin Min Thu says:
2021-05-09 at 9:21 PM
2021-05-09 at 9:24 PM
PDF ရဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများ အားလုံးအောင်မြင်ပါစေ ။
တရားသောစစ် အောင်မြင်ရမည်။ကျရာနေရာ လိုအပ်နေရာမှ ပူးပေါင်းဖို့ အဆင်သင့်ပါ ။
2021-05-09 at 9:28 PM
PDF မှ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။ အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။
Thantzin Aye says:
2021-05-09 at 9:29 PM
2021-05-09 at 9:36 PM
2021-05-09 at 9:38 PM
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေ။ ပြည်သူ့ ချစ်တဲ့ PDF တိုက်ပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ရ
Sai Kham Naunt says:
2021-05-09 at 9:39 PM
အရေးတော်ပုံ အောင်တော့မည်💪💪💪 PDF တစ်ယောက်ဆီတိုင်းကို Big Respect ပါ။
Xsu Htwe Aung says:
PDF တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်နိုင်မှု့တွေဘဲ ဖြစ်ပါစေ
Htar Wa Ra says:
2021-05-09 at 9:46 PM
ကျူပ်လည်း တစ်နေ့ ရဲဘော်တို့နဲ့ အတူ တိုက်ပွဲ၀င်မယ်
နွေ စန္ဒီ ဦး says:
2021-05-09 at 10:03 PM
ကျွန်မ အကိုနဲ့မောင်လေး ကိုသတိရမိ
Hsu Myatmyat Aung says:
2021-05-09 at 10:08 PM
PDF ထဲဝင်ချင်တယ် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ
2021-05-09 at 10:19 PM
PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဘေးကင်းရန်ကင်း အန္တရာယ် ကင်းကြပါစေ
တိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ပါစေ လေးစားလျက်ပါ PDF
ကျန်းမာ ချမ်းသာ စွာနဲ့ ဘေးရန် အပေါင်း ကင်းရှင်းပါစေ ။ အရေးတော်ပုံ မုချ အောင်ရမည်။
Htet Wai Kyaw says:
တိုက်မယ်ဆိုရင် စကစ တင်မကဘူး တရုပ်ပါ ထည့်တွက်ရမယ်။ အဓိက လက်နက်ကဘယ်က ရမှာလဲ
Thin Yu says:
2021-05-10 at 12:04 AM
နှောင်ကြိုး တွေ ကို ထားခဲ့ပြီး. ဖက်ဒရယ် အတွက် အသက်ကို စွန့်လွှတ်ဖို့ အဓိဌာန် ပြု ကြတယ်တဲ့ လား ကွယ် 😌😌😌
2021-05-10 at 12:43 AM
Please assign good PR spoke person for ministry of defense to motivate the people and to psy war the စကစ
2021-05-10 at 12:45 AM
NUG အစိုးရမှ ခေါင်းဆောင်များခင်မျာ …..
NUGအစိုးရကို ကျတော်တို့ ပြည်သူအများစုက
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အကြံတစ်ခု ပြုချင်ပါတယ်။
NUG အစိုးရအနေနဲ့ ထီဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ထိုင်းထီပုံစံ (15) ရက်တစ်ခါ ဖွင့်ရင် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
လာမယ့် June လဆန်း 1 ရက်နေ့မှာ စဖွင့်စေချင်ပါတယ်။
တစ်စောင်ကို တစ်ထောင်စျေးသတ်မှတ်ပြီး ဖွင့်သင့်ပါတယ်။
ပထမအကြိမ်အနေနဲ့ အစောင်ရေ တစ်သန်းနဲ့
သေချာပေါက်အောင်မြင်မယ်လို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာပြည်သူပြည်သား သန်းနဲ့ ချီရှိနေပါတယ်။
တစ်ယောက်ကို အနဲဆုံးတစ်စောင်တော့ သေချာပေါက်
wave pay ၊ kpay ၊AYA pay အားလုံးနဲ့ ဝယ်လို့ရအောင်
ထိုင်းထီကိုလည်း ဒီတိုင်းဘဲ ရောင်းနေတာမို့ အရမ်းမခက်ခဲပါ။
ဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဆိုလျင် ဖြစ်ပါသည်။လိုလျင်ကြံဆ နည်းလမ်းရပါ။
အစောင်ရေ ဆယ်သန်းနဲ့ တွက်မယ်ဆိုရင် ကျပ်ငွေ
သန်းတစ်သောင်း ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်မက ရောင်းရမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
လက်ရှိ စစ်အာဏာရူးအစိုးရက ရောင်းရငွေရဲ့ လေးဆယ်ရာခိုင်နူန်း ဆုကြေးပေးပါတယ်။
NUG အစိုးရက ငါးဆယ်ရာခိုင်နူန်း ပေးပြီးလုပ်ရင်
သန်းငါထောင်ကို ဆုကြေးအဖြစ် ပေးလို့ရပါတယ်။
ဆုကြေးကို ပထမဆု သိန်းငါးရာ အစုတစ်ထောင်ပေးရင်
အိမ်ထောင်စု တစ်ထောင် ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
NUG အစိုးရအတွက်လည်း ရံပုံငွေ သန်းငါးထောင်
(သိန်းပေါင်း ငါးသောင်း) ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
ဒီငွေကို CDM သမားများကိုလည်း ထောက်ပံံ့နိုင်သလို
အရေးပေါ်မည်သည့် နေရာမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ တစ်စောင်တထောင် လူတိုင်းတက်နိုင်သလို
ပြည်ပရောက် နေတဲ့သူတွေအတွက် ဆယ်စောင်က
ဒါက NUG အစိုးရထံ(15)ရက်တစ်ခါ ဝင်နေမဲ့ ဝင်ငွေပါ။
တနည်းအားဖြင့် ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားများရဲ့
မိမိတို့ အစိုးရကို အခွန်ဆောင်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ပေးပါခင်မျာ။NUG အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီထက်ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေကိုတောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာမို့
လုပ်နိုင်မယ်လို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းက အင်တာနက်အသုံးပြုသူ နွေဦးတော်လှန်ရေး
တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး မိမိတို့ Facebook မှတဆင့်
NUG အစိုးရ မြင်အောင် ကြားအောင်း ဝိုင်းပြီး တင်ပေးပါ ။
share ပေးပါ။Copy လုပ်ပြီး တင်ပေးပါ။
NUG အစိုးရ အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထီဖွင့်ပြီး စစ်အာဏာရူး အုပ်စုရဲ့
သူတို့ထီသာ မရောင်းရတာ NUG အစိုးရရဲ့ ထီက
ရောင်းမလောက်ဘူး ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်။
2021-05-10 at 1:00 AM
ငါတို့ အလေးပြုရမယ့် တပ်မတော် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း
Tun Htike T says:
2021-05-10 at 7:03 AM
PDF ရဲ့ အလံ logoလေး တင်ပေးပါလား?
2021-05-10 at 9:17 AM
Miller Panb says:
2021-05-10 at 10:09 AM
God bless KNU TNLA KIA AA 💕 mndaa cdf PDF
သဒၶါ သဒၶါ says:
2021-05-10 at 11:10 AM
ရင်ထဲကိုထိတယ် အသက်ဘေးကင်းပါစေ နတ်ကောင်းနတ်မြတ်ကူညီ​မှာပါ ဖယ်ဒရယ် ဆိုရင် အကုန်လုံး ရင်ထဲထိတယ် မျက်ရည်တွေ တောင်ဝဲမိတယ် အရေး တော်ပုံကြီးအောင်မှာပါ ​​​​မြန်မာ့သတ္တိကမ္ဘသိစေရမယ်
Myo Gyi Myo Gyi says:
2021-05-10 at 11:17 AM
ပြည်သူချစ်တဲ့ ပြည်သူ့သွေးသား ပြည်သူ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲတိုင်း အောင်ပါစေ🙏🙏🙏
Naing Ko Kkn says:
2021-05-10 at 7:31 PM
ထိုင်တောင် ကန်တော့ သင့်တယ်။လေးစားလွန်းလို့ ကိုယ်တွေ မလုပ်နိုင်သေးလို့
ဝါ ေခါင္ says:
2021-05-10 at 7:44 PM
အရာရာ အောင်မြင် ပါစေ
息をする 高速メモリ says:
Jo Ker ဒေါင်းပေးပါ
Ah Say says:
2021-05-12 at 4:35 AM
You are all 50 millions hearts !!!
ဖြား မိန္းကေလး says:
2021-05-12 at 1:44 PM
က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္မူေတြ ကုိယ္တုိင္ခံစား၍ ျပည္သူ႔အတြက္သယ္ေဆာင္လာႏုိင္ပါေစ တုိက္ပြဲႏုိင္အထိအခုိက္မ႐ွိအႏုိင္ရပါေစ